कप्तान सुजल ! | Hamro Khelkud
लेवान्डोस्की चम्कदा बायर्नको फराकिलो जित
रेलिगेसन जोनको ब्रेमेनसँग साल्केको हार
इकार्डी पीएसजीमै रहने
रोनाल्डो, मेस्सी अनि उमेर
टेबल टेनिस एकेडेमी सुरु गर्दै नविता
कप्तान सुजल !
राष्ट्रिय फुटबल टोलीले एएफसी सोलिडारिटी कप जितेको अर्को साता ३ वर्ष पुरा हुँदैछ । २०१६ नोभम्बर १५ मा भएको फाइनलमा मकाउलाई १–० ले हराउँदै नेपालले पहिलो पटक एएफसीको औपचारिक प्रतियोगिता जितेको थियो ।
मकाउविरुद्धको फाइनलका नायक थिए, मिडफिल्डर सुजल श्रेष्ठ । उनले २९ औं मिनेटमा गरेको गोल नै खेलको निर्णायक बनेको थियो । चोटका कारण त्यसअघि बंगलादेशमा भएको बंगबन्धु गोल्ड कप र भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उपाधि जित्दा त्यो मौका गुमाएका सुजलका लागि खेल जीवनमा सिलिडारिटी कप प्रतियोगिता अर्थपूर्ण रह्यो ।
सोलिडारिटी कपले उनलाई फेरि टोलीको नियमित सदस्यका रुपमा फर्कन मद्दत गर्यो । ‘त्यो मेरो खेल जीवनकै सबैभन्दा अविष्मरणिय क्षण थियो,’ सुजलले स्मरण गरे,‘ म त खुसी हुनेनै भए । मेरो परिवार पनि त्यो सफलतामा निकै खुसी थियो । फुटबल खेलेर मैले परिवारलाई खुसी पार्न सकेको क्षण त्यहि थियो । त्यसैले जीवन रहेसम्म त्यो क्षण भुल्न सकिन्न ।’
सुजलको खेल जीवनमा बिहीबार अर्को महत्वपूर्ण क्षण बन्यो । म्यानमारविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा उनले नेपाली टोलीको कप्तानी गरे । विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) को मान्यता पाएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको ‘क्याप’ काउन्ट हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले जनाएको छ । त्यसअर्थ त्यो सुजलले राष्ट्रिय टोलीलाई कप्तानी गरेको पहिलो खेल थियो । यद्दपी उनले कप्तानी गरेको खेलमा नेपाल ३–० ले पराजित भएको थियो ।
‘सोचे जस्तो खेल्नै सकेनौं । कोही एक जनाले मात्र होइन पुरै टोलीले नै सोचे अनुसार गर्न सकेनौं, म्यानमारसँगको खेलका बारेमा उनले भने,‘ सम्हालिन नपाउँदै तेस्रो मिनेटमा गोल खायौं । त्यसपछि दबाबमा पर्नु स्वभाविक थियो । दोस्रो हाफमा केहि सुधार त भयो तर फेरि अर्को गोल खायौं । हाम्रो प्रदर्शन सन्तोषजनक भएन ।’
यसअघि सुजलले मलेसियाको क्लबविरुद्ध र यसै महिना म्यानमारको यू २३ विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा पनि नेपाली टोलीको कप्तानी गरेका थिए । तर, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त खेल थिएन । विश्वकप छनोटको पछिल्ला ४ खेलमा गोलकिपर किरण चेम्जोङले कप्तानको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए ।
विश्वकप छनोटमा नियमित कप्तान विराज महर्जन टोलीमा पर्न असफल हुनु र उनका समकालिन भरत खवास सेनाको तालिमका लागि थाइल्यान्डमा रहेका कारण किरणले कप्तानको जिम्मेवारी पाएका थिए । तर, म्यानमार भ्रमणमा किरण नभएपछि र ६ महिना भन्दा लामो समयपछि राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका भरत पहिलो रोजाईमा नपरेका कारण सुजलले टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका थिए ।
यद्दपी उनी आफैंले भने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा पहिलो कप्तानी भन्ने पछि मात्रै थाहा पाए । ‘ फुटबलका माध्यमबाट देशलाई प्रतिनिधित्व गर्नु आफैमा ठूलो कुरा हो,’ उनले भने,‘त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा आफ्नो कप्तानीमा राष्ट्रिय टोली उत्रर्नु गर्वको विषय हो । खेल जीवनमा यहाँ
सम्मको यात्रा तय गरौंला भन्ने कहिल्यै सोचेको थिइन । यहाँ सम्म आइपुग्दा खुसीको बेग्लै अनुभुती हुन्छ,’ सुजलले हाम्रो खेलकुदसँग भने ।
सन् २०११ मा पोखरामा भुटानविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा डेब्यू गरेका धनकुटा नगरपालिका ७ का सुजल एन्फा एकेडेमीका उत्पादन हुन् । उनी रोहित चन्द, नीराजन मल्ल लगायत खेलाडीको ब्याचका हुन् । सिग्नेचर मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबका समेत कप्तान रहेका सुजलले मंसिर ३ गते विश्वकप छनोट अन्तर्गत कुवेतविरुद्ध हुने खेल दशरथ रंगशालमा नहुने निर्णयले खिन्न बनाएको बताए ।
‘लामो समयपछि घरेलु मैदानमा फुटबल खेल्ने टोलीमा कस्तो उत्साह थियो,’ उनले दुःख पोखे,‘ तर नहुने खबरले दुःखी भएका छौं । रंगशालाको मापदण्ड नपुगेका कारण हामीले आफ्नो मैदानमा खेल्न नपाउने परिस्थिति बन्नु यो साच्चै हाम्रो सरकार र हाम्रा लागि लाजमर्दो विषय हो ।’ अर्को महिना स्वेदशमा आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को टोलीमा अहिले सम्म सिनियर खेलाडीका रुपमा सुजल पनि टोलीमा छन् ।
यू २३ ले साग खेल्ने भएपनि सिनियर ३ खेलाडी बढी उमेरका राख्न पाउने प्रावधान छ । त्यसमा सुजलसहित रोहित, विक्रम लामा, नवयुग श्रेष्ठ र किरण छन् । यी ५ मध्येबाट ३ खेलाडी सागका लागि छनोट हुने सम्भावना छ । सागको साविक विजेता हुनुको नाता र घरेलु मैदान भएको कारणले उपाधिको रक्षाका लागि टोली उत्साहित रहेको उनले बताएका छन् ।
बार्सिलोना स्टार राकिटिचको सेभिया फर्कने चाहना
जसलाई रोनाल्डोले आफूभन्दा राम्रो भनेका थिए
फेडेररले मेस्सी र रोनाल्डोलाई पछि पारे